Visa Hindida Degdegga ah ee Booqashada Degdegga ah ee Hindiya, Codsiga Degdegga ah ee Visa Online
Visa Degdeg ah oo Hindi ah - Dhimashada Xubin Qoys ah, Safar Deg Deg ah oo loogu aado Hindiya, Fiisaha Degdegga ah ee Hindiya
An Degdeg Visa Hindi ah (eVisa India si deg deg ah) waxaa la siiyaa kuwa dibada jooga ee u baahan inay yimaadaan Hindiya oo xiisad ka taagan tahay hordhac Fiisaha waxaa intaa dheer loo yaqaan an Fiisaha Degdega ah ee Hindiya. Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Hindiya, oo ay tahay inaad u timaaddo Hindiya dhibaato iyo xaalado deg-deg ah sida geerida xubinta qoyskaaga ama mid aad u jeceshahay, aadista maxkamadda ujeedooyin sharci ah iyo xubinta qoyskaaga ama qofka aad jeceshahay inuu la kulmayo cudur dhab ah, waqtigaas ayaad dalban kartaa fiiso dalxiis oo deg deg ah inuu yimaado Hindiya. Si ka duwan fiisooyinka kala duwan sida Dalxiisayaasha Hindida Visa, Ganacsiga Hindida Visa, Visa Caafimaadka Hindida fiisada Degdega ah ee Hindiya / Codsiga Visaha Degdega ah ee Hindiya ayaa dhinac dhigaysa dadaal aad u yar oo loo diyaariyo. Haddii ay dhacdo inaad u baahatid inaad u timaadid Hindiya sababaha sida socdaalka, booqashada wehelkaaga, aadayo xiriiro dhinacyo badan leh, waqtigaas wax isbeddel ah kuma sameyn kartid fiisaha dhibaatada Hindiya marka la eego xaqiiqda ah in xaaladaha noocaas ah aysan ahayn loo arkay inay yihiin kuwa dhibaatooyinka. Sidaa awgeed, waa inaad dalbataa fiisooyin noocyo kala duwan ah. Mid ka mid ah waxyaalaha ka dhigaya Codsiga fiisaha elektaroonigga ah ee Hindida ah waa inay u egtahay in wax laga qabto xitaa dhamaadka usbuuca shakhsiyaadka u baahan inay u yimaadaan Hindiya dhibaatooyin ama sababo aan macquul ahayn.
The E-fiisada degdegga ah ee Hindida bixintu waxay qaadataa 1 ilaa 3 maalmood oo shaqo ah marka arjiga si habboon loo dhammeeyo, warbixinno loo baahan yahay la gudbiyo lana dhammaystiro codsigiisa. Wixii ah fiiso aan caadi aheyn, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso lacag aad u sareysa si aad ugu hesho fiisaha deg-degga ah ee Hindi degelkan. Nidaamkan Degdega ah ama Adeegyada Fiisaha ee degdegga ah ayaa loo heli karaa Dalxiis, Caafimaad, Ganacsi, Shir iyo goobjoog caafimaad fiisaha baaraya.
Waxyaabaha dib loo xusuusto markii aad dalbaneysidFiisaha Degdega ah ee Hindiya:
Marka la barbardhigo fiisooyinka kala duwan, helitaanka fiiso Degdeg ah oo la caddeeyey ayaa dhib badan leh, maadaama ay ku tiirsan tahay oggolaanshaha sidii ay ahayd. Xaaladaha kiliinikada iyo dhimashada, waad noqon doontaa loo baahan yahay in la siiyo mas'uuliyiinta warqad nuqul ah oo ka socota rugta caafimaadka si loo muujiyo cudurka ama gudbitaanka. Haddii ay dhacdo inaadan sidan oo kale sameynin, Visa-kaaga Degdegga ah ee Hindiya ayaa la diidi doonaa.
Qiyaas mas'uuliyadda buuxda ee bixinta khiyaanooyinka saxda ah sida lambarka taleefankaaga, cinwaanka iimaylkaaga iyo dirista arrimaha bulshada ee waraaqaha la ixtiraamo ee xog dheeri ah
The Codsiga Visaha Degdega ah looma qaban munaasabadaha Qaranka Hindiya sida Maalinta Jamhuuriyada 26 Janaayo, Maalinta Xorriyadda ee 15ka Ogast, Gandhi Jayanti 2 Oktoobar iyo wixii la mid ah.
Haddii uu murashaxu haysto wax ka badan hal aqoonsi sharci ah, waxyeelo fiisaha ah, fiiso dhicis ah ama fiiso ah, oo si wax ku ool ah loo siiyay fiiso weli muhiim ah ama fiisooyin kala duwan, markaasi oo codsigoodu qaadan karo ilaa 4 maalmood doorashada Dowladda. Dowladda Hindiya ayaa leh awooda ugu dambeysa ee go'aanka arjiga laga xareeyay sarkaalkaan website.
Diiwaanada loo baahan yahay Visa Degdega ah ee Hindiya
Sida hadda loo tixraacay, waxaad u baahan tahay inaad soo gudbiso nuqullada warbixinnada muujinaya dhimashada ama cudurka gacaliyahaaga.
Nuqul la baaray ee baasaboorkaaga haysta sharciyeyn lix bilood ah la laba bog oo cad. Hubi Shuruudaha Visa Passport-ka Hindiya iyo Shuruudaha Visa ee Hindida Hindida ah sawirkaaga hadhka ah ee socda oo leh aasaas cad oo damaanad qaadaya nadiifinta. Waad u adeegsan kartaa sawir sare oo lagu qaaday taleefanka gacanta sababtan awgeed.
Sidaad ku heli doontid fiisada elektaroonigga ah ee Degdegga ah ee Hindida ah:
Sida fiisooyinka kala duwan, Fiisaha Degdegga ah ee Hindida ama Fiisaha Degdegga ah ee Hindida waxaa lagu siyaadiyaa muuqaalka. The fiisada waxaa lagu keydin doonaa nidaamka kombiyuutarka, Degdeg Visa Hindi ah maahan shaabad jireed baasaboorka, sarkaalka waaxda socdaalka wuxuu ka eegi karaa sax ahaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee aad ku timaado Hindiya. Waxaad ku imaan kartaa sarkaalka dhaqdhaqaaqa gaarka ah adiga oo raacaya boorarka si aan shaki ku jirin loo arki karo. Hal shay oo kale oo ay tahay inaad dib u xasuusato ayaa ah inaad doorato terminaalka hawada ee ugu dhow ujeeddada aad soo jeedisay ee Hindiya. Mashquul yaraanta garoonka diyaaradaha, ayaa si dhakhso leh fiisahaaga loo diyaarin doonaa.
Imaatinka xiga waa soo noqnoqoshada waddamada, dalabyada isdaba jooga ah, ee degganayaashoodu u qalmaan Visaha Degdegga ah ee Hindiya ama fiisada Degdegga ah ee Hindiya
(Haddii aad tahay qof deggan mid ka mid ah quruumaha la socda ee aasaaska u ah Baakistaan, xilligaas uma qalmi doontid, waxaadna u baahan tahay inaad la xiriirto Safaaradda Hindiya ee kuugu dhow).
Shiinaha- SAR Macau
Saint Christopher Iyo Nevis
Saint Vincent Oo Grenadines The
Turkida Iyo Caicos Isl
Vatican City - Quduuska Arag
Soo koobista Fiisaha Degdega ah ee Hindiya
Qodobkaan, waxaan kaaga sheegnay fiisaha Deg-degga ah inaad Hindiya / fiisada elektaroonigga ah ee deg degga ah nidaamka dalabka, dukumiintiyada loo baahan yahay, wadamada u qalma iyo macluumaadka lagama maarmaanka u ah xaaladaha loo qaaday sida xaaladaha fiisada Degdega ah.
Haddii aad qabtid wax su’aal ah ama shaki ah, la xiriir Taageerada Macaamiisha Visa ee Hindida Visa Degdeg ah.
Hubso inaad hubisay u-qalmitaanka fiisadaada elektarooniga ah ee Hindiya.
Muwaadiniinta Mareykanka, Muwaadiniinta Boqortooyada Midowday, Muwaadiniinta Australiyaanka ah iyo Muwaadiniinta Jarmalka awooddo ka dalbo khadka tooska ah ee Hindiya eVisa.
Fadlan dalbo fiisaha elektaroonigga ah ee Hindida ah usbuuc ka hor duulimaadkaaga.